वर्तमानमा, infrequently छैन हामी अवधि जीवनको देखिन्छ एक आहार पूरक। केही खुराक लामो अन्य आहार पूरक अवधारणा मेरो नातेदार दाह excites रूपमा, विशेष प्रयोग गरेका छन्, तर केही बाटो खोज्न गर्छन। म यस क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेका, र अब तपाईं संग रुचि को आहार पूरक को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ज्ञान साझेदारी गर्न सक्षम छ ती मध्ये एक हुँ। त्यसैले, म उपभोक्ताहरु को भीड bioadditives एक पूर्वाग्रह छ किन व्याख्या गरेर सुरु गर्न चाहन्छु। यी अनुमानको आधारमा आहार पूरक बारेमा सबैभन्दा नकारात्मक जानकारी। सबै को पहिलो, बजार मा कम गुणस्तर कम लागत आहार पूरक, बाटो मा आर्टिसनल विधिहरू द्वारा निर्मित को एक ठूलो संख्या "बन्द, हाय खचाखच भरिएको च्यातेर, आकर्षक लेबल टेप थियो।" साथै, रूस मा डाक्टर अझै पनि संस्थानहरुमा पोषण सिकाइएको छैन। डाक्टर थाह छ के छैन के, यसलाई अस्वीकार गर्न सजिलो छ। हाम्रो देशमा एउटा ठगी हो - हराउनु खरीदार शुरू एक panacea रूपमा बेचिएको additives। अक्सर ठगी पेंशनरों, यातना रोगबाट वा ती को सिकार वजन पातलो दाना देख चाँडै गुमाउन प्रयास गर्दै गर्ने। तर, यो रूस मा पूरक आहार गुणस्तर सबै छैन कि होइन। अक्सर, हामी उच्च गुणवत्ता आवश्यक जब महिलाहरु को लागि भिटामिन, वास्तवमा, हामी पूरक आहार, अक्सर यस्ता साकार बिना पाउन। जिगर, शुद्ध पार्नुहुन्छ प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो, साथै बाल, छोराछोरीको स्वास्थ्य, महिला स्वास्थ्य को उपस्थिति - यो सबै हामी इच्छुक छन्, र पूरक आहार को कार्य को दायरामा समावेश जस्तै।
Networkers, कम्पनीहरु अक्सर तिनीहरूलाई छुट जारी र कम मूल्य मा आफ्नो उत्पादन किन्न प्रस्ताव। जहाँ किन्न - कम्पनी वा फार्मेसी को नेटवर्क? रूस मा पूरक नेटवर्क संगठनका कारण थिए। यो दृश्यमा विकल्प तपाईंको हो। जब अन्य सबै मापदण्डहरु लागि उपयुक्त लागि पूरक आहार को स्तर - वितरण को विधि साँच्चै कुरा छैन। "एक महिनाको लागि मात्र!", वाक्यांश "चमत्कारी कार्य", "माथि छिटो गर!" "अब कल" - एक विशेष आहार पूरक को पनि निकला प्रचार को, मिडिया मा खबरदार त्यहाँ वाक्यांश झनै गर्दा "आज मात्र!"! "सुपर उत्पादन।"
राम्रो आहार पूरक कसरी चयन गर्ने? मेरो अवलोकन मा आधारित, म यस्तो क्षणमा मा हेर्न सिफारिस गर्न चाहन्छु। पहिलो, आहार पूरक निर्माताको प्रतिष्ठा र कम्पनीको additives मा, पूरक वितरण। वर्ष को लागि एक प्रतिष्ठा कमाएका कि एक ब्रान्ड, गुणस्तर पालन गर्न प्रतिबद्ध छ। विजन, Herbalife, Neways, कोरल क्लब, Tianshi, NSP, Amway Nutrilite: लोकप्रिय पूरक आहार को रूस मा ब्रान्डहरु को सूची। यो उत्पादन विधि पत्ता गर्नुपर्छ। गुणस्तरीय प्रविधी लागू यदि निर्माता, यसको आफ्नै प्रविधी मा केंद्रित। स्वैच्छिक नैदानिक परीक्षा को उपलब्धता बारेमा जान्नुहोस्। तर, म आवश्यक सुरक्षा कागजातहरू संग नैदानिक परीक्षा भ्रममा तपाईं सोध्नु। गुणस्तर स्तर को प्रमाणपत्र मा एक नजर लिनुहोस्। र, कुनै शङ्का, तपाईं रूस मा दर्ता को प्रमाणपत्र हुन छ। दर। BAA महंगा चार हजार rubles, म तपाईं किन्न सल्लाह। मेरो अनुभव-दुई हजार rubles सर्वश्रेष्ठ मिलान मूल्य-गुणवत्ता पूरक खुद्रा मूल्य।
भिटामिन "क्याल्सियम komplivit": समीक्षा र सिफारिसहरू
Nibbler - यो के हो र कसरी प्रयोग गर्ने? कसरी nibbler, एक nibbler राम्रो चयन गर्न?
को अन्डा पानी मा floated भने, यो हुन सक्छ?
होन्डा भियतनाम (2013) - जापानी क्रसओभर को एउटा नयाँ संस्करण